Suurtagal ma tahay in dib loo helo bogaga internetka ee PR10?
Dhab ahaantii waxay u egtahay mid aad u fiican inuu noqdo mid run ah. Si kastaba ha noqotee, wax walbaa waa wax dhab ah haddii aad haysato hab xikmad ah dhibaatada. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato in ay jiraan fursado badan oo lagu helo PR 10 backlinks maalin kasta. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa inaad ilaaliso indhahaaga iyo dhegahaaga furan mar walba sii wadaan raadinta fursadaha dhismaha cusub - business logo ideas free. Waa macquul in la isku dayo farsamooyinka dhismaha ee waxtarka leh ee waxtar leh marka loo eego macaamiisha martida ama faallooyinka si aad u hesho xiriirka sare ee PR.
Aan ka wada hadalno siyaabaha suurtagalka ah ee lagu heli karo backwardks PR10. Qaar ka mid ah websaydhadu waxay u muuqdaan kuwo aaminsan in habka kaliya ee loo heli karo xidhiidhada sarreysa ee tayo sare leh inay soo saaraan wax cajiib leh. Haddii maadadaada ay faa'iido leedahay, waxaad heli doontaa tayada dabiiciga ah ee dibadda. Hase yeeshee, way ka fog tahay xaqiiqda. Waxay ku shaqeyn doontaa dhammaadka, laakiin qofka ayaa muddo dheer sugaya. Hab kale oo caadi ah oo loo dhiso dib udhaca PR10 waa in la abuuro waxyaabo aad u wanaagsan isla markaana sameysto olole ku-meel-gaar ah oo ku dhex yaal suuqaaga ganacsiga adoo weydiinaya milkiilayaasha bogagga iyo bloggers inay kugu xiraan. Hase yeeshee, labadaba istaraatiijiyooyinka dhismaha ee labaduba maaha wax ku ool ah xaqiiqda dhabta ah
. First of dhan, ma fududa in la abuuro content fantastik ah siinaya dadka isticmaala macluumaadka taas oo aan marnaba maqal. Waxay qaadataa wakhti badan iyo dadaal loogu talagalay farsamooyinka maaddada tayada leh. Dhibaatada kale waa marka aanad udub-dhexaadin la xiriirin. Xaaladdan, waxaad ku xisaabtami kartaa ilaha webka dhexe ama tayada hooseeya. Gaabisku ma shaqeeyo xaaladahaas. Intaa waxaa dheer, waxay u malaynayeen in saamilayda ay codsiyo badan ku codsanayaan fursadaha fursadaha dhismaha maalin kasta. Xaaladaha intooda badan, waxay ka gudbi karaan codsiyadaada adigoon wax akhriyin macnahaaga.
Xalka ugu fiican iyo, habka, nolosheyda noloshayda, waa in aad wax walba sameyso adigoon ku tiirsaneyn kuwa kale. Aan u eegno sida ay u shaqeyso.
Abuuri kartaa dhabarkaaga
Waxaa laga yaabaa in uu waalan yahay, laakiin waxaad ku abuuri kartaa dhabarkaaga dhanka dambe ee webka PR ee kale. Tusaale ahaan, waxaan daneynayaa barnaamijyada PR sida 10 Google, Reddit, Facebook, LinkedIn, YouTube, iyo kuwo kale. Goobahaasi waxay kuu oggolaanayaan inaad abuurto tayada aad u tayo sareysa, dib-u-habboon oo kobciya oo hagaajiya darajadaada bogga. Kala xiriiri kartid boggaan internetka ee caanka ah. Waxaad u baahan tahay inaad abuurto goob joog ah oo tayo sare leh, oo tayada leh oo ku haboon mid ka mid ah goobahaas oo kaliya kadibna ka baxo dhabarkaaga. Waxaad ubaahan tahay inaad abuurto muuqaal fiican oo aad ku buuxiso macluumaadka ugu sarreeya. Shaqadaada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in la abuuro waxyaabo badan oo ku xiran xiriirkaaga. Markaad sidaa sameysid, waxaad isku xiraysaa awooddaada iyo habdhaqanka.
Marxaladda soo socota, waxaad u baahan tahay inaad abuurto isku-xir u dhexeeya dhammaan ilaha webka ee meesha aad joogto. Tusaale ahaan, haddii aad daabacdo boostada cusub ee Facebook, ka dibna waa inaad ku xiri kartaa LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter, iyo akoonada kale. Aayaddan oo kale, sidaas darteed dhammaan bogagga naftooda waxay leeyihiin dib u laabasho. Natiijo ahaan, waxaad heli doontaa dadaal badan oo PR 10 backlinks ah dadaalkaaga adiga oo aan isticmaalin boqolkiiba.